I-Palamidi, Greece - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yePalamidi
Bukela ividiyo ekhuluma ngoPalamidi
Hlola iPalamidi inqaba edolobheni Nafplio esifundeni sasePeloponnese eningizimu Greece. Siphezulu esiqongweni sentaba ephakeme yamamitha eyi-216, eyakhiwa amaVenetians. Inqaba yasePalamidi, ebigcinwe isesimweni esihle kakhulu, ingenye yezimpumelelo ezinkulu kakhulu zezakhiwo zokwakha zaseVenetian.
Inqaba leyo kwakuyiphrojekthi enkulu kakhulu futhi efisayo, kepha yaqedwa kungakapheli isikhathi esifushane ukusuka kwi-1711 kuze kube se1714. Kwi-1715 yathunjwa amaTurks futhi yaqhubeka ingaphansi kokulawula kwayo kuze kube i-1822, lapho ithunjwa amaGrikhi.
Kunezindawo eziyisishiyagalombili zenqaba.
I-Palamidi iyidolobha elikhulu futhi elihlaba umxhwele, eligcinwe kahle futhi mhlawumbe liyisakhiwo esihle kunazo zonke ngaphakathi Greece.
Le nqaba isendaweni enhle futhi inombono omuhle ngeGulf, idolobha laseNafplio nezwe elizungezile. Kukhona izinyathelo ze-913 esitebhisini somoya esivela edolobheni ukuya enqaba. Kodwa-ke, ukufinyelela esiqongweni senqaba kukhona abangaphezu kwenkulungwane. Izindawo ezisedolobheni laseNafplion zizothi kunezinyathelo ze-999 ziye phezulu kwenqaba.
Izikhumbuzo ezibaluleke kakhulu zesiza yilezi:
- INqaba. Isakhiwo sokuzivikela saseVenetian esenzeka ekuqaleni kwekhulu le-18th. Inezindawo eziyisishiyagalombili ezizungezwe izindonga. Izitebhisi ezinde eziqiniswe ngamabhulukwe amancane aqala phansi kwithambeka leNW futhi ziholele enqabeni ephezulu yegquma.
- Isonto laseSt Andrew, elakhelwe kwelinye lamabhomu enqaba. Yisonto eligoqiwe emgqonyeni kanye nengxenye yasempumalanga eyakhiwe ngaphansi komunye wemidwebo esekela izindonga. Ingxenye yakhona yamahhala inemizila emibili.
- Ijele laseKolokotronis. Elinye lamaphethelo, elibizwa nge- “Miltiades”, lalisetshenziswa njengesitokisi sasejele sikaTheodoros Kolokotronis, iqhawe le-Greek Revolution.
IBourtzi castle iyibhilidi lamanzi laseVenetian elisho umbhoshongo ophakathi nendawo ethekwini laseNafplio. Kukholelwa ukuthi yijele lokuqala lamaGrikhi.